'पढ्नका लागि विदेश जानै पर्दैन, नेपालमा नै छन् उत्कृष्ट कलेज'
‘स्वदेशी शिक्षा सबैको इच्छा’ भन्ने मुल नाराका साथ दरबारमार्गस्थित अन्नपूर्ण होटलमा यही साउन २८ र २९ गते तेश्रो शैक्षिक परामर्श मेला हुदैँछ। यस मेलामा नेपालमै उच्च शिक्षाका प्रदान गर्ने उत्कृष्ट ४० वटा कलेजहरुको सहभागिता रहनेछ।
उनीहरुले अध्यापन गर्ने विषयहरु, शूल्क, छात्रवृति लगायतका जानकारी तथा आफ्नो इच्छा र पृष्ठभूमिका आधारमा कस्तो विषय छनोट गर्दा उचित हुन्छ भनेर जानकारी दिनेछन् । मेलाका आयोजक एजुकेसन डटकमका प्रबन्धक निर्देशक जीवन लामा गोलेसँग गरिएको कुराकानी-
मेला आयोजना गर्नुको मुख्य उद्धेश्य के हो ?
नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै विद्यार्थी विदेशिने क्रम ह्वातै बढेको छ। एक तर्फबाट हेर्दा विभिन्न समयमा इ­क्यान लगायतका संस्थाहरुले विदेशी कलेजहरुबारे दिने परामर्शले पक्कै पनि बाहिर अध्ययन गर्न चाहने विधार्थीहरुलाई कुन कलेज छनोट गर्ने भन्नेमा केहि सहज भएको छ तर अर्कोतर्फ भने यसले स्वदेशी शिक्षा गुणस्तरीय छैन् भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।
हामीले यो मेला मार्फत त्यो गलत सन्देशलाई चिर्दै नेपालमै स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त उत्कृष्ट कलेजहरु छन् भनेर बुझाउन चाहेका हौँ। त्यस्तै, एउटै छानामुनी ४० वटा कलेजहरुमार्फत तिनले पढाउने विषयहरु र पद्धती, भर्ना प्रक्रिया, लिने शूल्क तथा छात्रवृतिको व्यवस्था, कुन विषय छनोट गर्ने हो र छनोट गर्दा तीनको ‘स्कोप’ कस्तो छ भन्ने परामर्श दिन यो मेला आयोजना गर्न लागिएको हो ।
यहाँ नै राम्रा अवसर छ भनेर त भन्नुभयो। तर स्वेदशका विश्वविद्यालयको भन्दा विदेशी सर्टिफिकेटलाई धेरै भ्यालु यहाँको रोजगारदाताहरुले दिने तथ्यलाई त नकार्न सकिँदैन नि?
हेर्नहोस्। अवसर भनेको ‘ग्रयाब’ मात्र गर्ने होइन ‘क्रियट्’ पनि गर्न जान्नुपर्छ र अवसर सिर्जना गर्नलाई त नेपाल प्रशस्त सम्भावनाहरु छन्। यहाँ ठूला ठूला होटलहरु खुल्दै छन्, पर्यटन उद्योगमा ठूलो लगानी भित्रिएको छ।
हाइड्रोमा पनि त्यत्ति कै मात्रामा अवसरहरु छन्। अन्तराष्ट्रिय चेन भएका बैंकरुका साथै बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु नेपाल भित्रिरहेका छन्। आइटीको माग पनि त्यत्तिकै बढ्दै गएको छ। रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरु यहाँ नै देखा पर्दैछन्।
कृषिका धेरै क्षेत्रमा युवाहरु लाग्नुपर्छ भनेर भनेर सरकारले अनुदान तथा उद्यमी बनाउन आयोजना राखेर ऋण समेत दिने गरेको छ। त्यसैले बजारको माग अनुसार आफूलाई कसरी ‘सेलेबल’ बनाउने हो भनेर विद्यार्थीले सोच्नुपर्छ। मेलाले त्यो पाटोमा समेत परामर्श दिनेछ।
हाल कस्ता विषयहरु प्रति विद्याथीहरुको आर्कषण रहेको छ ?
खास गरी विधार्थीहरुले व्यवस्थापन र समाज विज्ञान रोज्ने गरेका छन्। त्यसभित्र पनि व्यवस्थापन संकाय अन्र्तगत सबैभन्दा धेरै आर्कषण बीबीए, बीएचएम, बीटीटीएम, बीआइएम, बीएसडब्लु लगायतका विषयप्रति आर्कषण देखिएको छ।
पर्याप्त परामर्शको कमीले विद्यार्थी आफू कुन कुरामा कुशल छु र केमा सम्भावना छ भन्ने नै थाहा नपाई रहेको अवस्था छ नि।
विदेश तिर विज्ञहरुबाट परामर्श प्राप्त गर्न पैसा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसपश्चात विज्ञले विद्यार्थीको मनोविज्ञान, आर्थिक अवस्था, उसको रुचि हेरेर उसलाई उचित सल्लाह दिने गर्छ। तर हाम्रो त्यस्तो परपम्परा पूर्णरुपमा बसिसकेको छैन्।
परिवारको दबाबले वा कुन पेशालाई समाजले कसरी तौलने गर्छ त्यो देखेर पनि विधार्थीहरुले आफू अनुकुल विषय छनोट गर्न जानी राखेका वा पाइराखेका छैन््न। तर साक्षरता दरमा आएको सुधार, स्वतन्त्रता तथा खुल्लापनले भने त्यो अवस्था कम गर्दै भने पक्कै लगेको छ।
आजको पुस्ता अरुले के पढ वा के गर भन्छ त्यसैलाई जस्ताको त्यस्तै अप्नाउने खालको पनि छैन्। यद्यपी पढ्नलाई परिवारमा निर्भर हुनुपर्नेहुँदा परिवारलाई आफूले पढ्न चाहेको विषय र त्यसका विविध आयामका बारेमा राम्रोसँग बुझाउन भने विद्यार्थीले सक्नुपर्छ।
अहिले त विदेश पढ्न जाने लहर नै छ । नेपालमा नै पढ्ने कलेजहरु पर्याप्त छन् भनेर मेला आयोजना गर्न लाग्नुभएको होइन ?
विदेश पढ्न जानु गलत हैन्। तर विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञानले देशको हितमा के कति मद्धत गर्यो त भन्ने कुराको लेखाजोखा भने हामीले पक्कै गर्नुपर्छ। तर हाम्रा अधिकांश विधार्थीेलाई विदेशका विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट भन्दा पनि त्यहाँ हुने कमाईले आर्कषित गरेको छ।
त्यहि भएर पनि विदेश पढ्न जानेको लहर बढेको जस्तो मलाई लाग्छ। यसले गर्दा शिक्षित युवा वर्ग विदेश पलायन भएको छ। आज हेर्नुहोस धेरै क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिहरुको अभाव छ। यो अवस्था आउनुमा पक्कै पनि विगतको राजनितिक अस्थिरताले भूमिका खेलेको छ।
तर अब भने हामी धेरै अघि बढिसकेका छौँ। स्वदेशमै अन्तराष्ट्रिय स्तरका राम्रा विषय पढाई हुने कलेज छन्। यहाँ नै धेरै अवसरहरु पनि छन् र हाम्रो खाँचो यहाँ छ भन्ने कुरा आज हामीले बुझाउन जरुरी छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २४, २०७४, ११:००:०९